50 GAMES FOR ANDROID — MYSTERY ZILLION
50 GAMES FOR ANDROID
I share for all Android User ,,,
MZ က ညီအစ်ကိုများ အားလုံးကို အကူအညီေတာင်းပါတယ် ခင်ဗျာ
Huawei c8500 ကို 2.2.1 တင်လိုမရဘူး။ original 2.1 လည်း တင်လိုမရဘူူး။ ဘာြဖစ်တာလည်းမသိဘူူူူူ 35% လောက်ဆိုရင် update failed ဆိ်ြုပီြပနေတယ် sd card မကောင်းလိုလားဆြိုပီတော့ လည်းြကည်တာလည်းမရဘူး sd card သံုးကဒ် လည်းတယ် မရဘူး software ေတွမကောင်းလိုလားဆြိုပီး အသစ်ထပ်down တယ် မရဘူး ဘာလုပ်ရမှန်းကိုမသိတော့ဘူး ကူညီကျပါအုန်း
recovery mode ကိုလည်း ဝင်တယ် wipe/dat/ factory reset လုပ်တာလည်းမရဘူး huawei logo ကလွြဲပီးဘာမှတက််မလာဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရမလည်းဆိုတာ ကူညီကျပါအုန်း recovery mode ကနေ apply/ sd card/ updat.zip ဆိုတာ ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလည်း အားလုံးကူညီကျပါလိုတောင်းဆိုပါတယ် ဝယ်ထားတာ ရက်ပိုင်းဘဲရှိသေးတယ်
i can upgrade 2.3.4 version ...
84st, 32x33 .. FONE CLUB ..
@kozawzaw >>>If you are in Yangon ,contact [email protected] and go to Location Myo Myanmar ,50, Shan Kone St; San Chaung Tsp (Myay Ni Gone Bus Stop) ,
Rangoon, Myanmar . He can upgrade to 2.3 version .
Or there also camp of Ubuntu ,Android and PIC camp at 4/5 June . See detail at http://www.mysteryzillion.org/discussion/10319/u-and-pic-ubuntu-android-pic-camp-4-5june
50 Games for Android မှ Games များ တော်တော် ကောင်းပါသည်... ကျေးဇူးဘဲ ကိုစိုး၀င်းရေ..
plez someone tell me how to install games and application directly into sd card of Huawei c8500 and if need , which software can i used for this?